Ardublock: ihe ọ bụ na ihe ọ nwere ike imere Arduino gị Akụrụngwa n'efu
Ardublock: Ihe ọ bụ na ihe ọ nwere ike imere Arduino gị
Nnweta nke mbadamba Arduino bụ ihe mgbe ochie ma na-abawanye n'ime iru nke akpa ego, mana olee otu o si arụ ọrụ? O doro anya na maka ịrụ ọrụ, anyị chọrọ koodu ma ọ bụ mmemme na-arụ ọrụ anyị chọrọ. Nke a, ọ dị nwute, ọ bụghị maka onye ọ bụla ma dị ịchọrọ ihe ọmụma mmemme iji mee Arduino ịkwagharị moto ma ọ bụ gbanye ọkụ.
Ihe a niile emeela ka ndị editọ ihe nkiri na ihe nkiri na-ahụ ihe na-ewu ewu. Typedị a mmemme na-enye gị ohere ịmepụta mmemme site na mgbochi nke dọkpụụrụ na-adọkpụ, na-echefu imechi ihe nkwado ma ọ bụ dee aha ọrụ ogologo. A na-akpọ ngwa ọrụ a ma ama nke na-ewebata mmemme ihe nkiri na Arduino Ardublock.
1 Gịnị bụ Ardublock?
2 Etu esi etinye Ardublock na sistemụ arụmọrụ anyị?
2.1 Nkwadebe nke kọmputa anyị
2.2 Ntinye Ardublock
3 Ndị ọzọ na Ardublock
Gịnị bụ Ardublock?
Ardublock bụ mmemme ma ọ bụ bụrụ mgbakwunye na Arduino IDE nke na-enye anyị ohere ịmepụta mmemme na koodu na-enweghị mkpa ide koodu, nke ahụ bụ, site na ngwaọrụ ndị a na-ahụ anya. Nke a nwere uru ya n'ihi na ọ bụrụ na anyị mara etu esi eme mmemme, anyị ga-echekwa oge dị ukwuu na usoro mmebi iwu ebe ọ bụ na anyị agaghị echefu ide akwụkwọ a maara nke ọma ";" ọ dịghịkwa emechi ihe nkwado ndị ahụ. Mmemme na ngwa ọrụ anya bụ mmemme ezubere maka ma novice na ọkachamara programmers na kwa maka ndi n’amaghi ihe omumu na acho imuta otu esi eme ya.
Dika anyi kwuru, Ardublock bu ihe nkwado karia mmemme nke onwe ya ebe obu na odi nkpa inwe Arduino IDE maka oru ya. Ya mere, na-eme nchịkọta, anyị nwere ike ikwu na Ardublock bụ nhazi nke Arduino IDE iji mezie mmemme koodu na mmemme mmemme.
Ardublock nwere ezigbo ihe karịa na ịbụ ngwa ọrụ maka novice programmer. Otu n'ime ihe ndị dị mma bụ ohere soro blọk rụọ ọrụ iji mepụta ọrụ ọsọ ọsọ.
Ardublock na-arụ ọrụ nke ọma na blọlụ yana nwekwara ike ịrụ ọrụ na akụrụngwa. Ya mere, anyị nwere ike ịmepụta ngọngọ nke bụ wiil, nke ọzọ bụ egwu na nke ọzọ bụ efere; oge ọ bụla anyị chọrọ iji blọk ndị a, anyị ga-akpọ ya ma ọ bụ dọrọ ya n’otu akụkụ nke windo ahụ gaa n’akụkụ nke windo ahụ.
Ọrụ na ohere Ardublock na-enye anyị bụ otu ihe Arduino IDE na-enye anyị, ya bụ, anyị nwere ike ijikọ Ardublock na bọọdụ Arduino anyị, ziga koodu nke Ardublock mepụtara ekele maka ngọngọ ma nwalee ọrụ anyị ọsọ ọsọ na mfe. Ma ọ bụ na mgbe anyị mechara mmemme ahụ, ihe omuma echekwara ka edere koodu, koodu nke Ardublock kere na blocks anyi.
Etu esi etinye Ardublock na sistemụ arụmọrụ anyị?
Ọfọn, anyị amaworị ma ọ bụ nwee echiche doro anya banyere ihe Ardublock bụ, mana kedu ka esi etinye ya na kọmpụta anyị? Kedu ka anyị ga-esi jiri ya?
Nkwadebe nke kọmputa anyị
Ọ bụ ezie na naanị otu akwụkwọ banyere Ardublock dị n'asụsụ Bekee, nke bụ eziokwu bụ na usoro ntinye dị mfe na ngwa ngwa ma ọ bụrụ na anyị nwere Arduino IDE. Nke mbu, anyi aghaghi ime nwere na kọmputa anyị nke Arduino IDE, ma ọ bụrụ na anyị enweghị ya arụnyere, ị nwere ike ịkwụsị ma hụ ebe a esi arụnye ya na Gnu / Linux. Ihe ọzọ anyị ga-achọ bụ nwere igwe ma obu Java yiri ya na otu. Ọ bụrụ na anyị na-eji Gnu / Linux, ezigbo bụ nzọ na Mepee, ọkachasị mgbe esemokwu dị n'etiti Oracle na Google. Ugbu a anyị emechaala ihe niile, anyị kwesiri ịga ukara Ardublock website ma nweta ngwugwu Ardublock, ngwugwu nke dị na usoro Java ma ọ bụ jiri ndọtị .jar. Ebudatara faịlụ a abụghị faịlụ nwere ike iji ya na ọkachamara nrụnye, yabụ na anyị ga-eji aka anyị mee ihe niile.
Primero Anyị na-emeghe Arduino IDE ma gaa na Mmasị ma ọ bụ Mmasị. Ugbu a, anyị na-aga nhọrọ "Sketchbook location:" nke ahụ ga-apụta na windo ọhụrụ. Nke a bụ adreesị ebe anyị ga - echekwa ụfọdụ plugins ma ọ bụ ihe ndị dị na Arduino IDE. Ọnọdụ ma ọ bụ adreesị pụtara ga-abụ ihe dịka “Documents / Arduino” ma ọ bụ ụlọ / Documents / Arduino. Anyị nwere ike ịgbanwe adreesị mana ọ bụrụ na anyị gbanwee ya, anyị ga-amarịrị adresị ọhụrụ bụ ịkwaga faịlụ Ardublock ebudatara ebe ahụ. Ọ bụrụ na anyị mepee folda Arduino anyị ga-ahụ na e nwere folda nchekwa na faịlụ ndị ọzọ.
Anyị ga-emegharị ngwungwu Ardublock na-ahapụ adreesị na-esonụ "ngwaọrụ / ArduBlockTool / tool / ardublock-all.jar". Ọ bụrụ na anyị emee mmemme Arduino IDE, oge eruola ka anyị mechie ya na mgbe anyị mepere ya ọzọ, n'ime Ngwaọrụ ma ọ bụ Ngwaọrụ nhọrọ Ardublock ga-apụta. Pị na ya ga-apụta windo ọhụrụ nke kwekọrọ na Ardublock interface. Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ bụ ihe dị mfe na ngwa ngwa mana ọ na-agbagwoju anya ma ọ bụrụ na anyị amaghị usoro ntinye.
Ndị ọzọ na Ardublock
Agbanyeghị Ardublock nwere ike iyi ihe ọhụụ na ihe pụrụ iche na Arduino, nke bụ eziokwu bụ na ọ bụghị naanị mmemme ma ọ bụ ngwa ọrụ anyị nwere iji mepụta mmemme anya. Enwere ọtụtụ ngwaọrụ na-elekwasị anya na mmemme mmemme, ruo n'ókè nke na ndị ọzọ niile na Ardublock bụ mmemme pụrụ iche ọ bụghị mgbakwunye ma ọ bụ mgbakwunye na Arduino IDE.
A na-akpọ nke mbụ ndị ọzọ a Minibloq. Minibloq bụ mmemme zuru oke nke na-elekwasị anya na mmemme mmemmeN'ihi ya, e kewara ihuenyo ya ụzọ atọ: akụkụ ya na blọk ndị a ga-ekepụta, akụkụ ọzọ ebe anyị ga-ebugharị nkanka anyị chọrọ iji na mmemme ahụ yana akụkụ nke atọ ga-egosi koodu anyị ga-eke, maka elu ndị ọrụ. Enwere ike inweta Minibloq site na nke a njikọ.
A na-akpọ ngwá ọrụ nke abụọ Ọkọ maka Arduino. Ngwaọrụ a na-agba mbọ imeghari ihe omume umuaka nke Scratch na ọkwa obula na otu nkà ihe omuma meputa mmemme. Ọkụ maka Arduino bụ mmemme zuru ezu, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, ndụdụ nke ọkọ.
Akụkụ nke atọ nke ngwaọrụ amatabeghị nke ọma, mana ọ bụ ngwaọrụ na-ekwe nkwa n'ime ngwa mmemme mmemme. A na-akpọ ngwá ọrụ a mod ngwa, ngwá ọrụ nke a mụrụ na Kickstarter ma ji nwayọọ nwayọọ na-etolite n'ụzọ dị mma. Ihe dị iche na mmemme ndị ọzọ nwere ike bụ ọkachamara na novice ọrụ karịa elu ọrụ. N'ikpeazụ, nke ọzọ na Ardublock ga-abụ ọdịnala nke Arduino IDE, ihe ọzọ na-adịghị ahụ anya na nke ahụ ga-adị maka ndị ọkachamara kachasị ọkachamara.
Ardublock ọ bụ a-akpali nnọọ mmasị ngwá ọrụ, ọ dịkarịa ala n'ihi na novice ọrụ. Mana ọ bụ eziokwu na ọ bụrụ n ’ị bụ ọkachamara n’ihe mmemme, ụdị ngwa ọrụ ndị a emeghi koodu ka emeputara ngwa ngwa kama ozo. Iji òké, n'ụzọ zuru ezu, dị nwayọọ karịa iji ahụigodo.
Ọ bụ ezie na ma ọ bụrụ na anyị bụ ndị na-enweghị ahụmahụ programmers ma ọ bụ na anyị na-amụta, Ardublock bụ a ukwuu tụrụ aro ndọtị ịghara ikwu ihe dị mkpa ebe ọ bụ na n ’usoro ndị a ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere ịme njehie syntax na obere nsogbu ndị siri ike ịchọta ma merie na Ardublock. Otú ọ dị Kedu ihe ị họọrọ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Arduino » Ardublock: Ihe ọ bụ na ihe ọ nwere ike imere Arduino gị
Ndewo, ọ dị mma izute gị. Ardublock ọ na - arụ ọrụ na ụdị ọhụụ nke Arduino?
Zaghachi Oscar Mansila
Ndewo, Site na ụdị nsụgharị ndị a ị nwere ike ịmepụta otu mmemme ahụ dị ka ide? N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, enwere ike ịme koodu ederede niile na blocks?
Ajuju ozo, kedu ka esi akowa ma obu jiri .h, ihe ndi ozo wdg. n'okwu a?
Etu esi wuo robotic ji obere ego
Otu esi eji Arduino mee ihe nchoputa ugha